Tamin’ny fangatahana fanohanana ny Global Voices Advocacy hahazo 3000 dolara amin’ny fanoratana lahatsoratra iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2019 2:23 GMT
Nitady fanampiana ny Global Voices Advocacy hahazo 3000 dolara tamin'io fotoana io! Loka hanampy anay hanohy hanentana mikasika ny fanafihana ny fahalalaham-pitenenana antserasera, ary hizara fitaovana sy tetikady miaraka amin'ireo mpikatroka sy bilaogera miatrika sivana any amin'ny faritra samihafa manerantany. Ny zavatra tokony hataonao fotsiny dia mamoaka lahatsoratra iray ao amin'ny bilaoginao, anisan'izany ity lahatsoratra manaraka …
Ity lahatsoratra bilaogy ity dia ampahany amin'ny fanentanana Blogging For a Cause” (http://www.zemanta.com/bloggingforacause/) mba hanentanana sy hamatsy vola ho an'ny hetsika mendrika mahaliana ireo bilaogera.
Zemanta dia fitaovana vaovao mahafinaritra ho an'ny bilaogy. Namoaka ity fifaninana ity izy ireo mba hamporisihana ny famahanana bilaogy momba ny hetsika mahasoa. Hahazo 3000 dolara tsirairay ny bilaogy dimy voalohany mahazo vato be indrindra.
Misy fiantraikany amin'ny olon-drehetra, fa tsy ny bilaogera ihany ny fahalalahana miteny ao amin'ny tranonkala. Zon'olombelona izany hoe miteny sy mamaky izay tiantsika. Manara-maso ny sivana antserasera manerantany ao anaty lahatsoratra isan'andro ny Global Voices Advocacy, ary manana sarintany ahitana ny sivana aterineto 2.0. Misy ihany koa ireo tari-dalana tahaka ny Anoymous Blogging with WordPress & Tor sy ny Blogging for a Cause izay ankafizan'ny bilaogera marobe.